Diiwaan-gelinta Musharaxiinta xilka Madaxweynaha 10-aad oo Maanta bilaabatay – HORUFADHI MEDIA |
Diiwaan-gelinta Musharaxiinta xilka Madaxweynaha 10-aad oo Maanta bilaabatay
Guddiga isku dhafka ee qaban-qaabada doorashada Madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa Maanta si rasmi ah u bilaabay diiwaan-gelinta Musharaxiinta xilka Madaxweynaha dowladda Federaalka.
Guddiga doorashada ayaa shahaadada Musharaxnimo Guddoonsiiyay Musharaxii ugu horreeyay xilka Madaxweynaha isku diiwaan-geliyay, kaasi oo noqday Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sheekh Shariif ayaa u mahadceliyay Guddiga doorashooyinka isku dhafka ee labada Aqal ee Baarlamaanka, wuxuuna ku boggaadiyay dardar-gelinta howsha socota ee doorashada Madaxweynaha dalka.
Sidoo kale Guddiga ayaa diiwaan-geliyay Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle oo bixiyey lacagta diiwaan-gelinta, isla markaana waxaa la siiyay shahaahada Musharaxnimo ee xilka Madaxweynaha.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kulan la qaatay wafdi ka socday Norway